South Africa Inoti Zimbabwe Ngaitevedzere Gwara reSADC paSarudzo
Mbudzi 12, 2010
South Africa, iyo inova mutongi gava panyaya yeZimbabwe inoti iri kuda kuti zvose zvakatenderanwa muchibvumirano cheGlobala Political Agreement, kana kuti GPA, zvinofanirwa kutanga zvazadzikiswa pasati paitwa sarudzo gore rinouya.
Mashoko eSouth Africa aya anopindirana nezviri kunzi zvinofanirwa kuitwa nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, avo vari kutiwo bato ravo reMDC rakagadzirira kupinda musarudzo dzinonge dzakachena.
GPA inoti munyika munofanira kunge muine runyararo, uye kuti mitemo yesarudzo neimwe yakaita saanaPOSA inofanira kuvandudzwa. GPA inotiwo gwaro rekuvhotesa nemiganhu yematunhu zvinofanira kugadziriswa pasati paitwa sarudzo.
Mashoko eSouth Africa aya anopikisa zviri kudiwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, zvekuti pangoitwa sarudzo nechimbi chimbi pakati pegore rinouya sezvo ivo naVaTsvangirai vave makara asionane.
Vane ruzivo nezviri kuitika muSADC vanoti vatungamiri venyika dzakawanda kuchamhembe kweAfrica vave kushushikana nekutanga kwemhirizhonga munyika kubva zvanzi naVaMugabe kunogona kuitwa sarudzo gore rinouya.
Mapato maviri eMDC anoti anotambira mashoko eSouth Africa. Asi mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vaudza Studio7 kuti itaure nevanotungamira Zanu-PF munhaurirano, VaPatrick Chinamasa, avo vange vasingadaire nharembozha yavo.
Amai Lindiwe Zulu, chipangamazano chemutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vati havasi kuzotambira sarudzo dzine mhirizhonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachishanda nesangano re Institute of a Democratic Alternative for Zimbabwe, VaJoy Mabenge, vanoti zviri kutaurwa neSouth Africa ndizvo zvinofanira kuitwa sarudzo dzisati dzaiitwa kuti pasaite mutauro.